UMartin Vrijland uyayeka: uMartin Vrijland
Abaninzi banokuphawula, ndandibhala nje ngeveki ephelileyo. Kwakuyixesha lokucinga. Ukuguqula iphepha le-Facebook ngokucacileyo kwaba negalelo elikhulu kumanani wam ahambele, nangona i-Facebook yokunyanzelisa i-influences ibe nefuthe kwiinyanga eziliqela. Isicelo sam ebantwini ukuba sibhalisele i-newsletter kunye nokuhlaziya ngokuthe ngqo nge-imeyile kwakungekho ncinane. Abantu bahlala bexhunyiwe kwi-Facebook, besazi ukuba ii-Facebook kunye ne-Google zihamba ngokubanzi malunga nento yonke. Ngokuqinisekileyo akhathazi abantu (nangona emva kwebali malunga neCambridge Analytica). Uninzi lwawo lufuna nje ukuxhomekeka (okanye umlutha) kwaye abaninzi babo bafunde i-anecdote yam eli nqaku malunga nokuba yiyiphi i-Facebook eyenzileyo yonke into, ngokucacileyo akunjalo okanye ayifuni. Uqikelelo lwam kukuba ukuxhatshazwa kwe-social endorphin kunamandla kakhulu.
Unyaka wokugqibela we-6 ndizinikele ngokupheleleyo ekubhaliseni (kwabanye) ukukhushulwa kunye (nakwabanye) amanqaku acasulayo. Ndizamile ukufikelela kumaqela amakhulu abantu ngokuphenya ngokubaluleka kokubulala kunye / okanye iimeko ezilahlekileyo, kodwa sele kubhaliweyo imbono yehlabathi ngongoma ebanzi ngelizwi. Oku kuqalile konke nge drive ukusuka kum kunye nomlinganiselo omkhulu weemfuno zokubamba nge-puddle kunye ne propaganda esiyiyo yonke imihla. Kwiminyaka yakutshanje kubonakala ngathi kukho i-tsunami yolwazi kunye nolwazi, ukuqinisekisa ukuba abantu abasemaphandleni abasayi kubona ihlathi baze babuyele kwisebe (kunye neentengiso zeendaba). Eli qhinga libonakala liphumelele, kodwa inxalenye yokukhulula imimoya iya kuhlala ikhona. Nangona kunjalo, uninzi lwabantu lubonakala lujongene nokuxhatshazwa kwezokuhlaliswa kwezemidlalo kwaye luhlala phantsi kwe-hypnosis yeprogram. I-movie I-Trumanshow yinto engokoqobo kunokuba abaninzi baninzi, banokufuna okanye bayakufuna ukubona.
Kwiinyanga ezimbalwa ezedlule ndivakalise amaxesha amaninzi ukuba kufuneka ndifumane inani elincinci lamalungu e-200 ukuba aqhubeke. Oku kukhokelela kumalungu ambalwa ambalwa, kodwa akwanele ukuqhubeka. Abo bantu baye benza okusemandleni abo kwaye bancedise mna, ndiyabulela gqitha ukuba ndikwazi ukuhlangabezana neendleko ngeli xesha, kodwa akusiyo isiseko sokwakha. Ngoko ke kufuneka ndifune ezinye iintlobo zengeniso kwaye kufuneka ndiyeke ukubhala. Ngalunye uhlangothi lweengqekembe kukuba ndicinga ukuba ndenzile umzamo okwaneleyo wokuvusa abantu. Yandixabisa yonke into. Ndiyongcolisa kwaye nditshitshisiwe kwi-intanethi kwaye ndibe neengongelo zokufa kwidilesi yam. Ndiyakwazi ukuqhubeka nokubhala unyaka we-100, kodwa ikhosi isetyenziswe kwaye ininzi yezimvu zikhetha ukuhlala emhlambini. Akukho mntu wenza umzamo wokuzisa utshintsho ngokwabo. Omnye ucinga nge-short-term gain from home and home, kodwa ubona idilesi yedijithali engabonakaliyo. Abantu bafumana utyhutshiso ababizayo ngokwabo ngokungahambi kwaye ngenxa yokulangazelela iinkokheli "eziza kuzisombulula". Umsebenzi wam wenziwe. Ndenze ngokwaneleyo. Ngoku uhamba ngokwakho.
Indlela yodwa yokugcina lewebhu njenge-archive online ibeka isihloko ngasinye emva kwesikrini sokukhokha. Ndiza kulungisa oku kule nkquba yeveki. Amalungu angahlala amalungu ekuthwala iindleko zesayithi, kodwa ndicinga ukuba ufuna ukuyeka inkxaso yakho. Amalungu aya kuqhubeka nokufikelela mahhala kuwo onke amanqaku kule website. Ngoko-awona malungu kufuneka ahlawule nganye into ngemihla embalwa. Ukuba andinayo, kufuneka ndiyifumane yonke i-intanethi ngaphandle kwe-intanethi, ngoko andinakukhetha. Emva koko, iindleko zokubamba, iilayisenisi zeekhompyutha kunye nezinto ezinjalo kufuneka ziqhubeke zikhutshwe.
Kuzo zonke abafundi abathembekileyo, abavakalisi nabaxhasi: Ndiyabulela kakhulu inkxaso yakho! Ndiyathanda ukuba wonke umntu abe nobulumko kunye namandla kuminyaka ezayo.
Ndilindele, ukuba iYurophu iya kuba phantsi kwe-Ottoman (Turkey) ukulawula malunga ne-2023, echazwe rhoqo apha. Ndaphinda ndalindela ukulindela ukuba kuya kubakho enye imfazwe yehlabathi (uhlobo lweArmagedon), kunye neYerusalem kwindawo ehamba phambili. Konke oku kubonakala ngathi kwenzeka ngexesha elifutshane. Okwangoku, intolongo yedijithali iyanda kwaye abantu bayaqhubeka nokusebenzisa iindlela abazihlolayo. I-Transhumanism (apho umntu ngokwakhe uya kutshintsha "kwi-smartphone ehambahambayo") iyakhawuleza kwaye iyanqabile, kwaye abantu balapho bayaqhubeka becinga ukuba konke kuya kuba kubi. Akukho mntu uhamba okanye, umzekelo, uphosa i-akhawunti yakhe ye-Facebook. Utshintsho olulodwa oluza kuzaliseka luguqu olwenziwa ngabantu ngabanye. Qhubeka usebenzisa i-Facebook yakho, WhatsApp, Instagram, Snapchat kunye nazo zonke ezo zixhobo ezinkulu ngenxa yokuba zinobuchule, ngoko uya kudibanisa kwiminyaka embalwa ukuba awukwazi ukubuyela emva. Oku kusele imeko kubantu abaninzi. Abantu ababoni ukuba ezi zixhobo ziyi-pre-stage ye-transhumane yoluntu. Uxhumo lobuchopho lukwimeko yokwenza (jonga apha) kwaye akusayi kuba lide ngaphambi kokuba iqumrhu ngalinye kunye neuron kwingqondo inxibelelwano lwe-Wi-Fi nge-solution ye-neuraldust (bona apha kwenzululwazi).
Ngoko ke i-1 iminithi ye12. Ndenze konke ukukhupha abantu abaninzi ngangokunokwenzeka, andinakukwenza okungakumbi.
Ndiyathanda ukuba wonke umntu abe namandla kunye nobulumko. Yenza izigqibo ezinqabileyo. Yiba umkhosi endaweni yomfaniswano. Iinqwelo ezifanelekileyo zeeminyaka ezayo yiyo yengqondo eyaziwayo kunye nesimo sengqondo sokungathobeliyo kwinkqubo kunye nezixhobo zayo ezihlakaniphile. Ukuba ukhetha ukungenzi oko, ngokukhawuleza uza kuba yikhoboka ledijithali yolwazi lobuchule (AI) kunye noorhulumente wehlabathi lolawulo. Ngokuqinisekileyo unako ukukhetha i-AI, kuba iintlobo ezifana nomqambi we-robot uSophia uya kukukholisa. Ungatsho ukuba andizange ndikuxwayise. Unamandla amaninzi kunye nobuliso obushushu!
FUNDA UKUPHATHA OKU
tags: amanqaku, eziziimbalasane, yekile, UMartin Vrijland, ubhale, umbhali, yeka, website
2 Aprili 2018 kwi-12: 53
Ubhala amanqaku amanqaku kaMartin, ndiyathanda ukuwafunda, ndiyilungu, ukuba kunokwenzeka ukuba ndingathanda ukukuxhasa ngemali, kodwa ngelanga loo nto ayisebenzi.
Musa ukuyeka, musa ukuyeka !!
2 Aprili 2018 kwi-14: 11
Ndiyabonga kakhulu uMartin yonke imizamo yakho kunye nokubhoboza ngamagama kunye nesilumkiso! Ubulungile kwizinto ezininzi! Ngokuqinisekileyo ndiya kukuphosa ukuphawula kwakho, kodwa ndiyayiqonda ingcamango yakho. Siyathemba ukuba siva kwakhona kuwe ukuba wenza ntoni okanye ngokukhawuleza abaninzi abantu abaninzi bafuna ukuva uluvo lwakho - banokukuxelela? Uhamba kakuhle !! Siya kuphinda siphumelele iqonga elinikezelayo kwimibono yabafundi bakho! Siyabonga kwakhona! Ndibuhlungu kakhulu ...
uJacob incwadi yenkuni wabhala wathi:
2 Aprili 2018 kwi-14: 48
bambani uMartin into eyenzeka kuqala. Ngaphambi kokusela ithemba lokuba akusekho ixesha elide. Abantu banakho kakuhle ukuba ndiyazi ukuba uyayeka. Ndimelene nobomi bam bonke ndiye ndabhekiswa ngabo bafana kunye nabantu abakushiya ngakwesokhohlo xa uthetha nabo malunga nento eyenzekayo ndiyathemba ukuba uya kubuyisa ubomi bakho
2 Aprili 2018 kwi-17: 23
Phakathi, ndihlala ndixhasa iMartin ukuba ndibhale i-euro ezimbini kwibhanki yam inyanga.
Ndadibana noMartin kuba ndathumela nge-imeyile kwaye kukho umnxibelelwano omhle.
Kwafuneka ndihleke kakhulu kangangokuthi ngokukhawuleza wayemi phambi kwendlu yam, ndisisilumko, kwaye sasiyidlala naphezu kwayo yonke into yethu.
Ngaphandle (sibonga) ukuhlukana kwethu okukhulu, ngu mntakwethu, umntakwethu onengqiqo ejulile kunye nesixhobo esingenakucinga ukuba sigcine amehlo akhe evulekile ngexesha lempompo yamangqungquthela ye-bullshit yeendaba ezisijikelezayo.
Lo myalezo ngokwakhe undibuhlungu ngokwayo.
Kunzima kakhulu ukuvusa abantu, ndade ndiqulunqe abantu be-10 abanokuzibandakanya, kodwa bengenalo.
Mhlekazi uMartin, ndiya kukukhumbula, kwaye ufike kwiMbuso wase-Ottoman ukususela kwinyanga nganye i-10 euro iya kungena kwi-1e
2 Aprili 2018 kwi-18: 41
Kwaye nokuba ngaba ngabafundi bakho abanalo i-counter-sound sound, awufanelanga le ndawo
Isayinwe uWilfred Bakker
Igama kunye nedilesi eyaziwayo
Wendy Gerritsen wabhala wathi:
2 Aprili 2018 kwi-19: 47
Ndisola kakhulu uMartin, kodwa iyaqondakala. I-chimney kufuneka ikwazi ukuqhubeka ukutshaya. Ndinezinto ezininzi zamanqaku akho. Kwaye ngokuqinisekileyo nalapho uphendule khona kumanqaku akho kwezinye izihloko ezithandekayo ezihambelana ngqo / ngokungahambelani nesihloko ochazwe kuso. Ndicinga ukuba kukho uhlobo lokutyunjwa okanye. ukuqhuma kwenzeka. Ngokuqinisekileyo oku kuhambelana nokunyanzeliswa ngoku kusetyenziswa yiGoogle, i-YouTube kunye ne-FB njl. Kwakhona amanqaku akho malunga ne-AI ndifumene kakhulu! UMartin, uyabulela kakhulu yonke imirhumo oyenzile ukufumana indlela kwi-jumble of (mis) ngolwazi apho sonke sikhona ngoku. Impumelelo eninzi ukunika ubomi bakho ingcaciso efanelekileyo kunye nemfuneko yemali yokufumana kwaye uqhubeke uzilandelele.
Xandra wabhala wathi:
2 Aprili 2018 kwi-19: 48
Dear Martin, ndiyaxolisa ukufunda ukuba iyakumisa ngoku ngoku. Ndiyakuthanda ukubonga ngale nto ngenxa yazo zonke iinqununu zakho ezinengqiqo kwaye ndinethemba lokukubona ngexesha elithile kwi-www.
Ewe, ndisenayo i-fb ukuba ndikwazi ukulandela intsapho yam kunye nabahlobo bam, kodwa ndibe ne-akhawunti kwiMe kwithuba elithile ngoku.
Andikho into yokuba u-MeWe akahlolwanga, kodwa akukho censorship (okwangoku?).
Mhlawumbi sinokuhlangana kunye apho?
Ndikunqwenela okulungileyo nakweyiphi na imeko!
Ukubamba ngokufudumalayo, Xandra.
2 Aprili 2018 kwi-21: 19
Ndiyabulela kakhulu yonke into yokufudumala emnandi (kwakhona nge-imeyile).
Oko kwandenza ndithule kwakhona ..
2 Aprili 2018 kwi-22: 44
I Theosophists aba isiphelo 1800 1900 ukuqala bonke bayavuma ukuba ihlabathi Western ayikwazanga ukusindiswa lidakile engenakulungiseka ... nam ndazama ukuba baphinde bakuthembe kunye nesabelo sam kwihlabathi elingcono. ... .yintoni eyabonakala ingenalusizo, ingakumbi ngoku ngoku sibe ngaphezu kwekhulu leminyaka. Yonke imibhalo yam isusiwe kwi-intanethi kuba kungenjalo impilo yam yayisengozini. Yonke into oyibhalayo iyinyaniso uMartin, kodwa iyaqhubeka idonsa ihashe efile ... engenanto. Kaloku ngubani ongafuni ukuphulaphula kufuneka azive oko. Into ecebisayo kukuba isihlwele siye saba njengobutshaba njengabo baqhubi abaye benza i-jigsuit infant to stay in the saddle. I-1 induduzo kukuba ekugqibeleni abayi kukwazi ukugcina ihlabathi labo eligulayo lihamba ... ukuhaha ngenxa yokuwa. Uhamba kahle uMartin?
i-astenster wabhala wathi:
3 Aprili 2018 kwi-04: 30
Ewe, uMartin, kwakukhona ukuba eze ?! ... kwaye ndazama ukukuxhasa njalo, kodwa ukuba kukho bambalwa, awukwazi ukuyilawula, ngelanga!
Ndinguye kwaye ndihlala ilungu elixhasayo kwaye ngoko ke ndingakwazi ukuqhubeka ndilandela ... undivusile (ngaphandle kwabanye ...) kwaye uye waba ngongqoqo kwaye uqaphele.
Kukho kwaye kubuhlungu kukuba ihlabathi liye la ...
Ngethamsanqa, ndiyazi kakuhle ukuba le nto ayiyi kuqhubeka kwaye kuya kuba nokulungiswa.
Ngoko ke ndihlala, nangona yonke into, ukuthembela ngokukrakra ukuba okulungileyo kuya kuphumelela kwaye ukuba imifanekiso engobuxoki ayiyi kuba yinyaniso ... kodwa oko akuthethi ukuba andifuni ukulandela le nkqubo ngokukodwa.
i-oror ye-george, i-1984 sele ixakekile!
Ukuphumelela ngempumelelo kwaye ndiya kuqhubeka kukuxhasa !!
Naomi wabhala wathi:
3 Aprili 2018 kwi-05: 53
Ndicinga ukuba kuhamba phambili kakhulu ukuyeka ukuhamba, ukunyundela, ukuzonda nokukopisha iipseudotheories eziphazamisayo kwabanye. Wena ongeze nto, ungakwazi ukubhala, musa ukuba izakhono journalistic, swi umonakalo omkhulu zobuqu abantu (umzekelo, unina ka Anass) kwaye wawa ukwenza okubi imiba phindo, kunye kwintlaka ophambene ingqondo malunga transhumanism kunye nomdla wakho sigwenxa nabantwana wabulawa , apho uxhaphaza uhlobo olusondeleyo.
luhle! (nangona ihlala ibuza umbuzo ukuba ufuna ngokwenene ityuwa, kuba ugcina ilizwi lakho alikho icala lakho eliqinileyo)
3 Aprili 2018 kwi-10: 46
Siyabonga uJerrho Hoogewij,
Uxolo, ndiza kuhlala ndibiza u-Jeroen, kuba unokuguqulwa ube ngumfazi, kodwa kum wena uhlala u-Jeroen. Ndiyabulela abantu abanjengawe, ndiqhubeka ndikhuthazwa ukuba ndiqhubeke. Okukhethileyo ukuzalisa i-intanethi ngokunyelisa kunye nokunyundela kwidilesi yam isoloko ivuselela ukuba ndiqhubeke. Wena kunye neqela lakho labangane abavela kwiSwapichou (yonke imvelaphi yamaYuda ndiyivile) baye benza konke okusemandleni abo ukuba bandibandezele ngeengcinga zobuqhetseba ezifana nokuveliswa kweengxelo zamapolisa ezikhohlisayo. Kuqinisekiswa ukuba ungumqeshwa welizwe kunye nelokuba uhamba nalo libonisa ukuba urhulumente wenza konke okusemandleni ukuguqula nayiphi na ingxolo ebalulekileyo entanyeni yakhe.
Ngokuba kukrakra kunene kum ngenxa yenu, ukuba wena ukuba mhlawumbi nangoku uziva ungonwabanga emzimbeni yakho entsha kwaye nkqu nabanye abantu kobakhe kwenza bahlupha (omnye), kodwa ndiyarhana ukuba ukhetho lwakho kuwe ukuba wakhe ikakhulu ngokusekelwe kwi yakho Iimbono ze-RTD kunye nenkolelo yakho yaseLuciferi. Ngokwenene uhlala uphila ubungqina bokuthi i-transgenderism yinto engaphambili ye-transhumanism kwaye oku kufanele kusikhokele phambili ekungeneni kwe-Luciferian pitfall.
Ndiyathemba ukuba ukhe uya kuqonda ukuba ukhetho umphefumlo wakho ukuba ukhethe ULusifa elihle kakhulu kubonakala phakathi kweli entolongweni umphefumlo, kodwa wena chu ekuqaleni ukufumanisa ukuba ULusifa kule matrix awunaso ngobisi eziwayo . Kwaye xa oko kuqonda kuqalisa ukugqithisa, uya kufaka i-paws uYeren. Kodwa unako ukubuyela rhoqo. Unokuhlala uveza ukuzisola kwakho. Ndifuna ukukunika iqonga lelo.
Ayinamsebenzi uzive ngathi beshumayela ubuxoki endibiza usichwechwelayo nakwinye okanye nithi ubangela yokwenzakala emzimbeni, kuba uyazi damn kakuhle kuqhubeka ntoni kwaye omnye kuphela kwaba iqiniso sokukhomba yokwenzakala emzimbeni u Jeroen. Kwaye ngokucacileyo wenza njalo phakathi kwabantu bakho abaphambene nabo (ubuphi ubungqina).
Phuma kwintombazana yakho ye-OTO! Phuma ejele lakho laseLuciferian. Awunelisekile. Uzijonga njengomntu onobugcisa obunamandla kakhulu, kodwa uyazi ukuba ulahlekelwa ngumkhondo (nangona kubonakala ngathi okwethutyana kule matriki umkhondo wokuwina).
Ndiyayithanda umphefumlo wakho kwaye ndingathanda ukuba uphele kakuhle.
Janj wabhala wathi:
3 Aprili 2018 kwi-07: 15
Ndiyanibulela ngenxa yam onke amanqaku akho. Uninzi lwawo. Kwakhona ufumana ingcamango yokuba le ngenye yezona ndawo "ezimbalwa" zengxelo zeendaba.
Kubonakala ngathi inkqubo isakhelwe kakuhle ukuze ukwazi ukutshintsha. Ngaba ndikhona ngamanye amaxesha ndixhalaba xa ndibona indlela abantu balele ngayo kakuhle ...
Inhlanhla kunye neyona nto ingcono kwixesha elizayo
NgoLwesihlanu wabhala wathi:
3 Aprili 2018 kwi-08: 31
UMarrtin, awukwazi ukuyeka, nguwe kuphela ovula amehlo abantu kuyo yonke inkohliso ejikeleze ngathi! Ndiyifumene kakhulu, kodwa ndiyiqonde. Umsebenzi wakho kufuneka uhlawulelwe, kulula nje. Kufuneka kubekho abantu be-1000 abavuza umsebenzi wakho? Ngokubuhlungu kukuba baninzi abafundi kodwa abaxhasi abaneleyo.
Ulungile uMartin kwaye ndiyathemba ukuba sinokuva into ethile yobulumko bakho kwakhona.
3 Aprili 2018 kwi-12: 19
Enye enye inqaku elihle kwakhona kwaye kwiminyaka emithandathu edlulileyo uye wakhupha abantu abaninzi kwaye ukuba indawo leyo ihlala ifikeleleke ngoko unokufunda indlela oye waphoswa ngayo kwimicimbi eyahlukeneyo.
Amajelo ezizezinye nep (abangcatshi yoluntu) njengoko WTK, DonQuijotte, iNibiru, ngefuth <Irma Schiffer kwaye igama smeerkezen kodwa uya kudana ngenxa yokuba wayedla amanqaku ezijijekileyo.
Ngaba ubhale ngokwaneleyo malunga nalo
Ingxelo yolondolozo oshiye ngayo kwi-net kusuka kwiminyaka embalwa edluleyo kuninzi ngokwaneleyo ukwenza abantu baqonde, benombulelo oluninzi kwaye banethemba lokuba abaninzi baya kuqala ukufunda.
Ndiyabulela amanqaku abukhali uMartin kwaye ngubani owaziyo ukuba saziva kuwe,
ngenxa yokuba: "Igazi lidla ngokukhawuleza apho lingenakho" (ngokutsho kukaCarolus Tuinman)
« Uhlangabezana njani nenkululeko yokuthetha? Yenza inzondo yakho-imam
UMartin Vrijland uyeka OKUBALULEKILEYO »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.322.755